अघिल्लो वर्ष सरकारले निजी अस्पताललाई पनि केही प्रतिशत शय्या अनिवार्य रूपमा कोभिडका लागि छुट्ट्याउन निर्देशन दिएकोमा यस वर्ष निजी अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि अनिवार्य गरेको छैन । निजी अस्पताललाई अस्पताल बेड अनिवार्य नगरेका कारण निजीका शøया खाली रहे पनि सरकारीमा चाप बढेको छ । चिकित्सकहरूले अहिले अन्य रोगका बिरामीको संख्या पनि घटेकाले निजीका शय्यासमेत कोभिड उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । ‘निजी अस्पताललाई समेत समेटेर तथा अस्थायी संरचना बनाएर कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ,’ महामारी विशेषज्ञ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले भने ।
उपत्यकामा हजार शय्याका लागि सम्झौता
स्वास्थ्य मन्त्रालयको शय्या अभावसम्बन्धी विज्ञप्तिको चर्को आलोचना भएपछि मन्त्रालयले उपत्यकामा १ हजार शय्या थपका लागि सम्झौता गरेको छ ।
आइतवार मन्त्रालयले पिपुल्स कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, किस्ट अस्पताल, जनमैत्री अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय क्यान्सर अस्पताल महाराजगञ्ज र कीर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालसँग थप शय्याका लागि सम्झौता गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले तत्काल १ हजारभन्दा बढी शय्या सञ्चालनका लागि अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिए ।
उपत्यकामा मात्र ७ हजारभन्दा बढी शय्या थप गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले देशभर शय्या थपका लागि तयारी गरेको बताए ।
निजी अस्पतालसँग पनि कोभिड उपचारका लागि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘केही निजी अस्पतालले आफै पनि संरचना तयार गरी कोभिड उपचार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार अन्य अस्पतालसँग पनि शय्या उपलब्धताका लागि छलफल गरिरहेका छौं ।’ विज्ञप्तिको चर्को आलोचनापछि शनिवार स्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले सरकारले कोरोना उपचारमा हात नछाडेको बताउँदै आइतवार नै उपत्यकामा १ हजार शय्या थप गर्ने बताएका थिए । उनले २/३ दिनमै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण ल्याइने जानकारीसहित कोभिड उपचारको व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए ।